निराश मुडमा किन यस्तो भन्छन् प्रचण्ड….? | NepalDut
निराश मुडमा किन यस्तो भन्छन् प्रचण्ड….?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेको मन्तव्य यस्तो छ : “क्रान्ति भनेको २/४ जना क्रान्तिकारीलाई क्रान्ति गर्ने रहर लागेर हुने चिज होइन । यसका लागि लाखौँ करोडौँ जनताको सहभागिता चाहिन्छ ।
जनता बिना त्यो हुन सक्ने कुरा होइन । आजको संसारमा जे–जस्तो स्थिति छ, त्यो सबैलाई विचार गरेर क्रान्तिको बाटो सरल रेखामा हुँदैन ।
यो उपलब्धि जे प्राप्त भयो, हामीले खोजेको त्यो भन्दा धेरै नै थियो । अहिलेको विश्व परिस्थित, देशको परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनले गर्दा यति मिले पनि यहाँबाट टेकेर अगाडि जाने भनेर हामी यसमा आएका हौँ ।
यसमा नआउँदा पेरुमा जे स्थिति भयो, फिलिपिन्समा जे भयो, लिट्टेको जे स्थिति भयो, हाम्रो त्यही हुनेवाला थियो । त्यही भएर हाम्रो आन्दोलनको त्याग र तपस्याबा प्राप्त हुनेजति लिइहाल्ने र त्यसलाई उपयोग गर्दै फेरि समाजवादको दिशातिर नयाँ तरिकाले अगाडि जाने बाटो अपनाएका हौँ ।
मैले यो कुरा तपाईंहरुलाई त्यो बेला बुझाउन सकिनँ जस्तो लाग्छ । त्यही भएर तपाईंहरुलाई लाग्यो यो पार्टी बिग्रियो भन्ने लाग्यो । त्यसमा तपाईंहरुको केही दोष छैन । क्रान्ति हुन्छ भनेर लागेको, घाइते छ, शरीर दुःखेको छ, फेरि क्रान्ति हुन्छ भनेर तपाईंहरु लाग्नुभयो ।
यसमा तपाईंप्रति पनि कुनै आरोप र आलोचना छैन । मैले सँधै भन्ने गरेको छु, मैले नै जिम्मा लिनुपर्छ ।
मात्रिका जी अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ । बच्चैदेखि हुर्काएको मान्छे, वहाँलाई त सम्झाउन सकिनँ । बीचमै छाडेर जानुभयो । अहिले मलाई खुसी लागेको छ, वहाँ सबैभन्दा नजिक आएर बस्नुभएको छ ।
ढिलो भए पनि ठीक निर्णय गरेर सही ठाउँमा आउनुभएको छ । ढिलोचाँडो विप्लव पनि यहीँ आउनुपर्छ । वहाँको पनि पेरुको जस्तै हालत हुन्छ । कि त वहाँ सिद्धिनुपर्छ कि यहाँ आउनुपर्छ । तपाईंहरु समयमा नै ब्युझिनुभयो । मैले भन्ने गरेको छु, जो जहाँ ब्युझिँयो त्यहीबाट उठेर हिँड्ने हो ।
समाजवाद धेरैभन्दा धेरै मानिस जम्मा भएर आउने कुरा हो । हामीले नै लडेर संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । आज यसलाई उल्ट्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा प्रतिक्रियावादीहरु छन् । यसलाई कसरी उल्टाउने भन्दा यसलाई ल्याउने पार्टी र यसका नेताहरुलाई बदनाम गरेर र सिध्याएर । यसका लागि षड्यन्त्र र बढी प्रचारहरु भइरहेका छन् ।
कतिपयले प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लाने, हेगमा लाने, एक दिन भएपनि जेलमा हाल्ने कुराहरु एउटा डिजाइन अन्तरगत भइरहेका छन् । यो परिवर्तन नचाहने तत्त्वहरु यसमा लागिरहेका छन् ।
त्यही भएर मैले एक जनालाई भने मलाई हेग लगेर पनि केही फरक पर्दैन । मलाई हेग लग्यो भने म विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छु । संसार भरकै जनताले चिन्ने हुन्छु । यो त न्यायको पक्षमा रहेछ, शान्तिको पक्षमा रहेछ भन्ने ठाउँ हुन्छ । त्यो मेरो लागि गर्व कुरा हुन्थ्यो । तर, मलाई लाग्दैन यिनीहरुले मलाई लान्छन् र विश्वकै हिरो बनाउँछन् ।
नेपालमा संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहुन्जेल हामी कोही पनि कमजोर हुँदैनौँ । यो रहँदासम्म हामीलाई जहाँ लगेपनि हामी हिरो । यो उल्टियो भने नेपालीले नै दुःख पाउने, नेपाल नै बर्बाद हुने खतरा हुन्छ ।
त्यही भएर आजको मितिमा जनतालाई माया गर्ने, परिवर्तन रुचाउनेहरु एक ठाउँमा जम्मा भएर यसको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जो साथीहरु अहिलेसम्म ब्युझेका छैनन्, जति उल्टो दिशामा गयो, त्यति क्रान्ति हुन्छ भन्ने ठानेका छन् ।
त्यो मार्क्सवाद विरोधी कुरा हो । उल्टो दिशामा गएर क्रान्ति हुँदैन । यहाँ फेरि राजा आयो भने क्रान्ति हुन्छ त ? नेपाललाई अरु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु कब्जा गर्यो भन्ने क्रान्ति हुन्छ त ? त्यो प्रति क्रान्ति हुनेछ । ”
‘प्रचण्ड’ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्टाउन विभिन्न प्रकारको चलखेल भइरहेको बताए।
यो व्यवस्थालाई उल्टाउन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले यसलाई ल्याउने पार्टीका नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने जस्ता प्रचारहरु गरिरहेको बताउँदै आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याए पनि केही फरक नपर्ने उनले बताए ।
सोमाबार बिहान आफ्नो निवास खुमलटारमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेकपामा प्रवेश गराउँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।